လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်နေတဲ့ MPT ၀န်ထမ်းတွေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်နေတဲ့ MPT ၀န်ထမ်းတွေ
လုပ်ချင်တိုင်းလုပ်နေတဲ့ MPT ၀န်ထမ်းတွေ
Posted by chityimhtoo on Feb 24, 2012 in Creative Writing | 20 comments
connection မကောင်းလို့complaint တင်ဖို့ MPT ကို ဖုံးနဲ့ ဆက်တော့ ကိုင်မဲ့သူမရှိလို့” MPT က လူတွေဆီက မတန်တဆဈေးတွေယူထားတာတောင် complaint ဖုံးကိုင်မဲ့သူမထားနိုင်ရလောင်အောင် ချီးထုတ်ကျလား ” ဆိုတာကို message ပို့ လိုက်တာကို ဖုံးလှိုင်းဖြတ်လိုက်ပါတယ် ။ အခုဖြတ်ထားတာ (၂)လ ရှိနေပါပြီ ! ဖုံးရုံးသွားမေးတော့လည်း ဘောလီဘောပုတ်ခံရတယ် ။ နောက်ဆုံးအပေါ်ကစကား အတိုင်း ကိုယ့်ရဲ့customer ရဲ့ ဖုံးကို ဖြတ်ထားတာတောင် ဘာဖြစ်လို့ လည်းဆိုတာ မသိရလောက်အောင် MPT ညံ့ဖျင်းနေလား ? လို့ ပြောလိုက်တော့မှ ဟုတ်တယ်ဖြတ်ထားတယ် ။ သူတို့ ကို တောင်းပန်စာ ပြန်ရေးမှ ဖွင့်ပေးမှာတဲ့ ! အဲဒီ ဖုန်းပိုင်ရှင်ကလည်း ” ငါက customer , service ညံ့လို့ ညံ့တယ် ပြောတာ ဘာမှားလို့ လည်း ။ ငါလည်း engineer တယောက်ဘဲ ။ မင်းတို့ လို ပြာတာကနေ အဘ ထိ ပြည်သူတွေကို ညာစားနေတဲ့ သူတွေကိုတော့ မတောင်းပန်နိုင်ဘူး။ မင်းတို့ မဖွင့်ပေးရင် သမတကြီးဆီထိ တိုင်းစားရေးပြီး copy ကို ဘာသာပြန်ပြီး အမေရီကန် သံရုံးနဲ့လူ့ အခွင့်အရေးအဖွဲ့ ကို ပါပို့ မယ် ပြောပြီးပြန်လာခဲ့တယ် ။ နောက်နေ့ ကျတော့ အ၀င်တော့ဖွင့် ပေးလိုက်တယ် ။ အထွက်နဲ့ internet မရသေးဘူး ။ ဖုံးနံပါတ်က ၀၉ ၇၃၀ ၄၁၉၉၇ ပါ ။ဆက်မေးကြည့်လို့ ရပါတယ် ။ ပြီးတော့ အဲဒီလို အမှန်တရားအတွက် ခေါင်းငုံ့ မခံဘဲ သတ္တိရှိရှိနဲ့ရင်ဆိုင် ပြောနေတဲ့သူကို ၀ိုင်းဝန်းကူညီဖို့ ကျမတို့ အားလုံးမှာ တာဝန်ရှိတယ်လို့ ထင်ပါတယ် ။ ဒါလေးကို ၀ိုင်း share ပေးကြပါ ။
ဟုတ်ပါတယ် … ဒီ MPT ကလူတွေ CUSTOMER ကိုစောက်ဂရုမစိုက်တာများပါတယ်။ခု ရတနာပုံတယ်လီပို့ ကနေလုပ်တဲ့ Y-talk ဆိုတာလည်း pfingo vs skype တို့မှာ စင်ကာပူ အမေရိကားကိုတစ်မိနစ် မြန်မာငွေ ၂၀ လောက်ဘဲကျတယ် ။ တစ်ချို့ဆို အလကားတောင်ခေါ်လို့ရတဲ့ နိုင်ငံတွေကို တစ်မိနစ် 0.15 ဆိုမြန်မာငွေ ၁၀၀ ကျော်ကျပါတယ်။ဒါကိုအရမ်းသက်သာတယ်လို့ အရှက်မရှိပြောနေတယ်။ပြီးတော့ လူတိုင်းလည်းသုံးခွင့်မရှိဘူး PAC လိုင်စင်ရှိမှတို့ ဘာရှိမှတို့ ဒါဆို အိမ်မှာလိုင်းဝယ်သုံးတဲ့ လူတွေကော
သူတို့က သူတို့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရောက်ပြီဆို အနုနည်း အကြမ်းနည်းနဲ့ကိုင်တာဗျ
ကြောက်လွန်းလို့ ရုံးဆို ဘယ်ရုံးမှကိုမသွားချင်တာ။
ကြိုက်တယ်ကွယ် ..အနှီသတ္တိကို ….
အမ်ပီတီ ကို တို့တွေ တအားချစ်ကြတာပါလား ….
မပုတင်ကို ချီးထုတ်ကျလား သွားပြောတော့ ချိတ်ချိုးတာပေါ့နော်
များတို့ ကတော့ နဂိုထဲက နံပြီးသား
ကျုပ်တို့ချီးပုန်းနဲ့ထုဖို့အဆင်သင့်ရှိပါတယ်
ဈေးကွက် ပြိုင်ဆိုင်မှု ကင်းမဲ့ခြင်းရဲ့ ပြယုဂ်တခုပေါ့ခင်ဗျာ…။ တိုင်းပြည်လုံခြုံရေး အကြောင်းပြချက်နဲ့ ဆသရက တယ်လီဖုံးဈးကွက် လက်ဝါးကြီး အုပ်ထားခွင့် ရထားတော့ ကပ်စတန်မာကို သောက်ဂရုစိုက်စရာ မလိုတော့ဘူးပေါ့…။
လူကြီးတွေပြောတာကြားဖူးတယ်။ နိုင်ငံ့ ၀န်ထမ်းဆိုတာပြည်သူကို အလုပ်အကျွေးပြုဖို့ တဲ့။ ရှင်းရှင်းပြောရရင်ဗျာ နိုင်ငံ အတွင်းမှာ ဖွဲ့ စည်းထားတဲ့ အစိုးရဋ္ဌာန ဆိုတာနိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာငွေ (တနည်းပြောရရင်) ပြည်သူတွေပိုင်တဲ့ငွေနဲ့ ရပ်တည်နေကြတာပါ။
အပေါ်ကကြောင်ကြီးပြောတာအမှန်ပါဘဲ။ ဈေးကွက်ပြိုင်ဆိုင်မှုကင်းမဲ့ ခြင်းရဲ့ ပြယုဂ်တစ်ခုပါဘဲ။
ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုသာ ပုဂ္ဂလိကလုပ်ကိုင်ခွင့်ပေးခဲ့ရင် MPT ကောင်တွေမြောင်းဘေး ရောက်ကုန်တာကြာပြီပေါ့ဗျာ။
ဒီကောင်တွေ လက်ရှိဝန်ဆောင်မှုပေးနေတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ ဘယ်သူကလက်သင့်ခံနိုင်စရာရှိလို့ လဲ??? ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ရဲ့ သဘောအရ အရည်အသွေးတို့ဝန်ဆောင်မှုတို့ နဲ့ သာယှဉ်ပြိုင် ရပ်တည်ကြစတမ်းဆိုရင် ဒီကောင်တွေ ပဆိုးတောင်လှန်ပြခံရနိုင်တယ်။
အခုအချိန်မှာတော့ Customer is always wrong လို့ ဘဲပြောရမယ့် သဘောရှိတယ်။
မတတ်သာလို့ သာ ဒီကောင်တွေနဲ့ ပတ်သက်ဆက်ဆံနေကြရတာ။
mpt နဲ့ ပါတ်သက်လို့ ကတော့ ခံစားလိုက်ရတာတွေအရမ်းများပါတယ်
ကြာခဲ့ပါပြီ…..ယခင် ခြင်းဖုန်းများခေတ်တုန်းက ရွှေဂုံတိုင်ရုံးမှာ ဘာကြောင်မှန်းမသိဘဲ
code ချိန်းဖို့ ဆိုပြီး ၇၀—- တွေကိုဆင့်ခေါ်လို့ သွားခဲ့ပါတယ်…
အဲ့ဒီမှာ သူတို့ စက်တွေနဲ့ စစ်ပြီးတော့ ခင်ဗျား ဖုန်းကလိုင်းပွားသုံးထားတယ်
တော်ကြာတစ်နေရာရောက်လိုက် တော်ကြာတစ်နေရာရောက်လိုက် လို့ ပြောပါတယ်
ကျွန်တော်က မပွားကြောင်း၊ ကားပေါ်မှာတင်ပြီးယူသွားနေတာဖြစ်ကြောင်းကို ပြောတာ
အဲ့ဒါနဲ ကိုယ်ကလည်းသူတို့ ကြောက်လောက်မဲ့နာမည်တွေနဲ့ ပြန်ဗျုးဗျဲတော့
ဒီနေ့တော့မရတော့ဘူးဆိုပြီး အတင်းဘဲနောက်နေ့ မှာလာယူဆိုပြီးချိန်းပါတယ်
ဒါနဲ့ အော်…ညနေလည်းဖြစ်ပြီဆိုတော့ ရုံးဆင်းတော့မှာဘဲဆိုပြီးနောက်နေ့ မှာသွားယူတော့
အဲ့ဒီ လူ ကဘာမှမပြောဘဲပြန်ပေးပါတယ်..စစ်ကြည့်တော့ ၀ါယာကြိုးစတွေအပြင်ထွက်နေပြီး
အ၀င် ring မမည်ပါဘူး.ဒါနဲ့ ပြောတော့ သူ့တပည့်တွေကိုကြိမ်းမောင်းပြီးဖြုတ်စစ်တာကို
လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ speaker ကြိုးတွေပြုတ်ထွက်နေပါတယ်… phone ရဲ့circuit board
လို့ သိလိုက်ပေမဲ့လည်းဘာလုပ်လို့ ရတော့မှာလဲ….
နောက်တော့ သူတို့speaker ကြိုးကိုခဲပြန်ဆော်ပြီးတော့ ပြန်ပေးလိုက်ပါတယ်..
သူတို့circuit board လဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာ
အခုတော့ အဲ့ဒီဖုန်းလည်း မရှိတော့ပါဘူး
ထူးခြားတာတစ်ခုက အဲ့ဒီလူပါ နောက် ၇ နှစ်လောက်ကြာတော့ပြန်တွေ့ ပါတယ်
အခြေအနေကတော့မတူတော့ပါဘူး သူက lowerhand ဖြစ်နေပါပြီ
ကောင်းကောင်းလေး ပညာပေးလိုက်ပါတယ်…( သူကတော့ကျွန်တော့်ကိုမမှတ်မိတော့ပါ )`
mpt ရဲ့ ရိုက်ချက်ထဲမှာခပ်ပြင်းပြင်းခံစားလိုက်ရတဲ့
အခြားအတွေ့ အကြုံတစ်ခုကိုတော့ နောက်မှဘဲ….
Coplaint center ကလဲဘာလဲဗျာ။ပြည်သူဆီကငွေလဲယူသေးတယ်
ပြဿနာကို ဖြေရှင်းပေးမယ် မရှိဘူး။စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းတယ်ဗျာ။
(M.P.T) ~~~~ ချီးထုပ် (M.P.T) ~~~~ ချီးထုပ် (M.P.T) ~~~~ ချီးထုပ်
အင်တာနက်တပ်ခ ၁၅ သိန်းပေးရတယ်။အင်တာနက်လိုင်းပျက်တာချီးထုပ် (M.P.T)
၅၀၀၀၀သောင်း ပေးရတယ်။အခုတော.လိုင်းပါပိတ်လိုက်ပီ။အခုလဲcall center လုပ်ပျန်ပီ။
ဘယ်လိုပိုက်ဆံလိမ်စားမလဲမသိဘူး။အကျင်.ပျက် MPT ၀န်ထမ်းများဖစ်နေပါပီ။
အဲဒီ MPT တော့ပြောကိုမပြောချင်ဘူး သူတို.ဆီဖုန်းခေါ်ရတာ ကျွန်တော် တို.မှာ ဘော်လီဘောရိုက်တဲ့ ဘောလုံး လေးတွေကိုဖြစ်လို. လွှဲလိုက်တဲဖုန်း တူနော်တူနောင်နဲ. MPT ဖုန်းခေါ်တဲ့နေ.က နားထဲကမထွက်ပဲစွဲနေတဲ့အသံကတော့ ဖုန်းလွှဲစောင့်တဲ့ တီးလုံးလေးပါပဲဗျာ…
၂၃.၂.၂၀၁၂ ကြာသပတေးညတုန်းကလဲ ၊ ဂျီအက်စ်အမ် ဖုန်းလိုင်းတွေ လုံးဝပျောက်ထွက်သွားတာဘဲဗျ ။
ကွန်ပလိန်း တက်ဖို့ ထားဦး ။ ဖုန်းဆက်စရာရှိတာတောင် ပီစီအို ပြေးဆက်ရတာဗျ ။
ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ် သူတို့တွေကဆရာကြီးအရမ်းလုပ်ချင်နေကြတာလေ အမှန်အကန်နဲံ့ တွေ့တေှာ့မှသူတို့လည်းလန့်သွားတာနေမယ်ဒီလိုပြန်ပြောရဲတဲ့အကိုကို ကျေးဇူးတင်ရမယ် နောက်လူတွေ လည်းပြန်ပြောကျတော့မှာလေ
ဟေ့ ဟေ့ ဟေ့………………………….
ရွာသူရွာသားတွေထဲမှာ MPT ၀န်ထမ်းပါလို့ဘယ် အကောင် အကောင်မ ၀န်ခံရဲသလဲ ။
MPT ကစောက်ကောင်တွေက ဘာမှလည်းသိတာမဟုတ် တတ်တာမဟုတ်ပဲ လိုင်းမရလို့ဖုန်းဆက်ရင်
လိုင်းကျနေရင်တောင်ယောင်္ကျားစကား လိုင်းကျနေတယ်အစ်ကို လို့ ရဲရဲပြောတာမဟုတ်ဘူးဗျ သူတို့လိုင်းကကောင်းနေသလို ဟိုဟာလေးလုပ်ကြည့်ပါအုံး ပင်းကြည့်ပါအုံး စက်လေးပြန်ပိတ်ပြန်ဖွင့်လုပ်ကြည့်ပါအုံး စုံနေအောင်လုပ်ခိုင်းသေးတာ နောက်ဆုံးမရမှ ဟုတ်တယ်အစ်ကိုလိုင်းကျနေတာလို့ ဆိုပြီး မိန်းမလိုမိန်းမရအကောင်တွေများတယ်
Government Servant (အစိုးရ၀န်ထမ်း) အစား Public Servant (ပြည်သူ့ဝန်ထမ်း) ဆိုတဲ့ mindset တွေ ပြောင်းကြဘို့ လိုနေပါပြီ။
Alexendre Pingpoung says:
DAMNABLE DICKHEAD STILL IN THE SYSTEM OF OUR GOVERNMENT. LE’T’S KICK THEM OUT.